लोकसेवा तयारी: विश्वमा सबैभन्दा ठूला के-के छन् ? – Lokpati.com
नेकपा अमेरिका प्रचण्ड सरकार प्रधानमन्त्री चितवन नेपाल प्रहरी पक्राउ नेपाली काँग्रेस पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अपराध केपी शर्मा ओली मृत्यु राशिफल
लोकसेवा तयारी: विश्वमा सबैभन्दा ठूला के-के छन् ?
By लाेकपाटी न्यूज	 Last updated Jan 16, 2020
काठमाडौं। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महादेश एशिया महादेश हो । एसिया महादेशमा कुल जनसख्याको उनान्साठ्ठी दशमलव ५५ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्दछन। यो संख्यामा ४ अर्व ५४ करोड ५१ लाख ३३ हजार ९४ जना हुन आउँछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो महासागर प्रशान्त महासागर हो। प्रशान्त महासागरमा कुल पानीको भागको पैतालिस् दशमलव ५ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ। प्रशान्त महासागरको सरदर गहिराई ४३ सय मिटर रहेको छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो ताल क्यास्पियन सागर हो। क्यास्पियन सागर रुस र इरानमा फैलिएको छ। यो तालको गहिराई ९ सय ४६ मिटर रहेको छ। क्यास्पियन सागरको क्षेत्रफल ३ लाख ९४ हजार २ सय ९९ रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सामुद्रिक बन्दरगाह पोर्ट अफ न्यूयोर्क एण्ड न्युजर्सी हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक बन्दरगाह सिड्नी हो। सिड्नी अष्ट्रेलियामा पर्दछ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युतगृह करिबा विद्युतगृह हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो वन कोणधारी वन हो। कोणधारी वन रुसमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना एञ्जेल झरना हो। एञ्जेल झरना भेनेज्वेलामा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो मनोरञ्जन स्थल डिस्ने वल्र्ड हो।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमी सहारा मरुभूमी हो। सहारा मरभूमी उत्तर अफ्रिकामा पर्दछ। सहारा मरुभूमीले ९४ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो टापु ग्रिनल्याण्ड टापु हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रायद्घीप अरेबिया हो।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो संग्रालय ब्रिटिश म्युजियम हो। ब्रिटिस म्युजियम लण्डनमा अवस्थित छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विज्ञान प्रविधि संग्रालय गुआङ्दोङ साइन्स सेन्टर, चीन हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युतगृह करिबा विद्युतगृह हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युत परियोजना याङत्सी थ्रीगर्ज हो। याङत्सी थ्रीगज चीनमा पर्दछ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिडियाखाना इनोसा रिजर्भ चिडियाखाना हो। इनोसा रिजर्भ अफ्रिकामा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो चरा अष्ट्रिच हो। अष्ट्रिच चरा १७ औं शताब्दीको सुरुमा नै लोप भयो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्यालय भवन पेन्टागन हो। पेन्टागन अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय हो।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो महाकाव्य महाभारत हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो घण्टा ग्रेटवेल हो। ग्रेटवेल मस्कोमा छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो घडी विगवेल हो। विगवृल लण्डनमा छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो विमानस्थल किंग अब्दुल अजिज हो। किंग अब्दुल अजिज विमानस्थल साउदी अरबमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विमान कम्पनी लकहिड विमान कम्पनी हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्टेशन ग्रान्ड सेन्टर टर्मिनल हो। ग्रान्डसेन्टर टर्मिनल न्युयोर्कमा पर्दछ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो फुटबल मैदान मराकाना हो। मराकाना फुटबल मैदान ब्राजिलमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो चलचित्र स्टुडियो युनिर्भसल स्टुडियो हो। युनिभर्सल स्टुडियो लस एज्जेलमा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सिनेमा हल रेडियो सिटी म्यूजिक हल हो। रेडियो सिटी म्यूजिक हल न्यूयोर्कमा पर्दछ।
विश्वको सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालय लाइबेरी अफ कंग्रेस हो। लाइबेरी अफ कंग्रेस अमेरिकामा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानसिक अस्पताल पिलग्रिन स्टेट अस्पताल हो। पिलग्रिन स्टेट अस्पताल अमेरिकामा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलोदरबार भ्याटिकन दरबार हो। भ्याटिकन दरबार इटालीमा पर्दछ। विश्वको सबैभनदा ठूलो खाडी मेक्सीको खाडी हो। सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय मस्को विश्वविद्यालय हो । विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भारत हो । विश्वको सबैभन्दा ठुलो मुखद्घीप सुन्दरवन हो। सुन्दरवन भारतमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो ज्वालामुखी मनालोवा हो।
कसरी गर्ने लोकसेवाको तयारी ?
बढ्दो बेरोजगारीसँगै नेपाली युवाहरुमा सरकारी जागिरमा आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ। सरकारी सेवा तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। विभिन्न शीर्षकमा पदपूर्ति गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष दरखास्त आह्वान गर्दै आउने गरेको छ। लोकसेवा परीक्षा पास गर्न मिहिनेतका साथ पढ्नुपर्छ।
विद्यार्थीमा बलियो आत्मविश्वास हुन जरुरी छ। कुनै एउटा विषयमा लक्षित गरेर पढ्नुपर्छ। अधिकांश विद्यार्थीले एकभन्दा बढी आवेदन दिने हुँदा कसलाई कति समय दिने भन्नेमा नै अल्मलिइरहेका हुन्छन्। तसर्थ, कुनै निश्चित लक्ष्य लिएर पढ्नुपर्छ।
लोकसेवा परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन हरेक विषयवस्तुको राम्रोसँग ज्ञान हुन आवश्यक छ। सम्बन्धित पुस्तकबाहेक वार्षिक प्रतिवेदन, प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुस्तक, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। लामो समयसम्म एउटै विषयवस्तु घोकेर बस्नुहुँदैन। दिनभरि किताब हेरेर समय बिताउनुभन्दा छोटो समय पढ्नु राम्रो हुन्छ। तथ्यांक र चित्रसँग जोडेर पढ्दा सम्झन सजिलो हुन्छ।
इतिहास, मिति, परिभाषा र तथ्यांक पढ्दा दैनिक क्रियाकलापसँग जोडेर फर्मुला बनाउनुपर्छ। पढेको कुरालाई बेलुका पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। विषयवस्तु एक–अर्कासँग जोडेर पढ्दा पछिसम्म याद रहिरहने हुन्छ। कुनै एउटा तथ्यांक अर्को सम्बन्धित तथ्यांकसँग जोड्दा ज्ञानको दायरा बढ्दै जान्छ।
लोकसेवा परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन धेरै विषयवस्तुको ज्ञान हुन आवश्यक छ। सम्बन्धित पुस्तकबाहेक वार्षिक प्रतिवेदन, प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुस्तक, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। केही कुरा पढेरभन्दा लेखेर बढी स्मरण गर्न सकिन्छ। तसर्थ आफूले पढेको विषयवस्तु लोकसेवाको उत्तर शैलीमा लेख्ने अभ्यास गनुपर्छ।
मुख्य शब्दलाई लक्षित गर्नुपर्छ। शब्द स्मरण गर्न सजिलो हुने भएकाले छोटो समयमै परीक्षाको तयारी गर्न सकिन्छ। कुनै विषयवस्तु पढ्दा सबल र दुर्बल पक्ष सँगसँगै पढ्नुपर्छ। यसरी पढ्दा कम समयमै धेरै विषयमा पूर्ण अध्ययन गर्न सहज हुन्छ।
वस्तुगत कसरी लेख्ने ?
परीक्षा दिन जादाँ सजिलैसँग पास हुन्छु भन्ने आत्मविश्वासकाका साथ जानु पर्छ। नडराइकन खुसी अनुहारका साथ प्रवेशपत्र तथा आवश्यक सामग्रीसहित समयमै परीक्षा हलमा पुग्ने र आफ्नो सिटमा बसी परीक्षाको परिवेशलाई आफ्नो बनाउने। आफैलाई कन्फ्युजन गराउने खालको तथा नजानेको उत्तरमा टिक नलगाउने।
विषयगत कसरी लेख्ने ?
परीक्षा दिन जाँदा पास गर्छु भन्ने आत्मविश्वास लिएर जानुपर्छ। लोकसेवाको परीक्षा दिँदा आत्तिनुहुँदैन। यो पनि अन्यजस्तै सामान्य परीक्षा हो। जाँचकले छोटो र तर्कयुक्त उत्तरलाई प्राथमिकता दिने गर्छ। तसर्थ, सकेसम्म सटिक उत्तर लेख्नुपर्छ। इतिहास, तथ्यांक, परिभाषा र उदाहरण जोडेर सिलसिलाबद्ध रूपमा लेख्नुपर्छ।
उत्तरको सुरुवात र अन्त्य तथ्यांक तथा उदाहरणमा लक्षित गर्नुपर्छ। सीमित समयमा लेख्नुपर्ने विषय विषय धेरै हुन्छ। यसले गर्दा, परीक्षामा समय व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्ने गर्छ। उत्तर जान्दाजान्दै पनि समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय परीक्षार्थी असफल भइरहेका हुन्छन्। तसर्थ, परीक्षाको सुरुवातीदैखि नै समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।
बीस करोड माग्न डा. गिरी द्वारिका होटेल गएको पुष्टि
आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल कहाँ कति छन ?